Princess Computer 1.2 အန္းဒ႐ိုက္ APK ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ | Aptoide
Aptoide ကို ထည့္သြင္းပါ
ဘာေၾကာင့္ Aptoide ကို သံုးသင့္တာလဲ။
Princess Computer ၏ ရွင္းလင္းခ်က္
မင်းသမီးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကလေးများသင်ယူဖို့အထောက်အကူပြုဖျော်ဖြေမှုဂိမ်းမျိုးစုံအမျိုးအစားများနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာ application ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဖန်တီးသူကလေးများကွန်ပျူတာနှင့်ကလေးမင်းသမီးဖုန်းဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကလေးဖုန်းကို Simulator ကို မှစ. ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့သြဖွယ်မင်းသမီး Computer ကိုတင်ပြ။ မင်းသမီးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဥပမာများအတွက်အက္ခရာ၏အက္ခရာရှိသည်သောအရာဝတ္ထုနှင့်အတူအက္ခရာသွန်သင်တစ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာအဘို့, B, လိပ်ပြာအဘို့, ကို C Carriage အဘို့, D ကို Dress ဘို့ဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်, etc မင်းသမီးကွန်ပျူတာကိုလည်းအက္ခရာစဉ်တွေစကားများရေးသားဖို့ကိုဘယ်လိုသင့်ကလေးကိုသွန်သင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ကီးနှင့်အတူတစ်ဦးလွယ်ကူသောလမ်းအတွက်စာအားဖြင့်အက္ခရာ။
-Everyday မင်းသမီးလေးလက်အိတ်များကဲ့သို့အရာဝတ္ထု, မြင်း, မှန်, ဒိုင်းလွှား, ပန်း, etc
ဒီဂိမ်းလည်းလှပသောအရောင်များ, ရယ်စရာမျက်နှာများ, ပညာရေးအသံတစ်ဦးချစ်စရာအသံမြည်ခြင်း, ဘာသာစကားမျိုးစုံ (စပိန်, အင်္ဂလိပ်) ရှိသည်။
အသံ mode ကို -Select နှင့်သင့်ဆိဟူသောစကားလုံးနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်လာတဲ့သောအရာဝတ္ထု၏အသံလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရတာဟာမော်တော်ကားဂိမ်း, သင့်ယောက်ျားလေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ဦးကဒီမှာတစ်ခုလွယ်ကူသောဂိမ်းကစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသူငယ်တော်ကိုစံချိန်ကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးစားနေအံ့ဖှယျဝိဇ္ဇာအတတ်အားသစ်တောနိုင်ငံတွေကိုခရီးလှကိုခံစားကြလိမ့်မည်နှလုံးသားများခုန်ခြင်းနှင့်စုဆောင်းတဲ့ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဂိမ်းထဲမှာအရောင်ရတာဟာဂိမ်း, သင့်ကလေးသည်တ္ထုများ၏အရောင်များကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေမှုပုံရိပ်တွေ Coloring ။
ဟမ်ဘာဂါ၏ရတာဟာစားသောက်ဆိုင်ထိုကဲ့သို့သောခရမ်းချဉ်သီး, ကြက်သွန်နီ, ဆလတ်, ဒိန်ခဲ, အသားအဖြစ်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏လိုအပ်သော sequence ကိုဖော်ထုတ်သည်, မိမိစိတ်ကိုချောမွေ့ဖို့သူငယ်ကိုကူညီပေးပါမည်။
မင်းသမီးလေးငွေသားမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူကုန်တိုက်မှာစျေးဝယ်သွားပါရဲ့ -Let! သင်ကစျေးနှင့်ငွေရှင်းကောင်တာတွင်နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်ကစားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့တော်တော်လေးပန်းရောင်ငွေသားမှတ်ပုံတင်ကိုသုံးပါ။ နှင့်ငွေသားမှတ်ပုံတင်ထဲကပိုက်ဆံရွှေ့ပါ။ သင့်ရဲ့ဖောက်သည်ပြောင်းလဲမှု၏ညာဘက်ငွေပမာဏပေးပါ။ ပျော်စရာရှိသည်နှင့်ဤမင်းသမီးလေးငွေသားမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုအသုံးပြုပါ။
ဧည့်ခံသင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ဖို့အများကြီး Animation နဲ့အရောင်များနှင့်အတူဤစိတ်ကူးဂိမ်းကြိုးစားပါ။
တိုးတက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပါ! သင်ဤဂိမ်းတစ်ခု ပို. ပင်ပျော်စရာဂိမ်းလုပ်ကိုမဆိုစိတ်ကူးရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်ကြဘူး။ သင့်ရဲ့မှတ်ချက်, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်အကြံပြုချက်များကိုလုံးဝကြိုဆိုကြသည်။
Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဦးကဲ့သို့ပင် Give: https://www.facebook.com/minibuugames/
Minibuu သားသမီးတို့အဘို့ပျော်စရာနှင့်ပညာရေးဂိမ်းများကိုဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့အဘို့အ, သားသမီးလှုံ့ဆော်မှု၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်း, တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးကူညီရန်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
သိကောင်းစရာများ: ရှာဖွေရေးဘား, အမျိုးအစား "Minibuu" အားဖြင့်လူအပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းကိုရှာဖွေ။
Minibuu မှာငါတို့ရှိသမျှသည်အသုံးပြုသူများသည်တွေရဲ့ privacy ၏အရေးပါမှုကိုနားလည်ပါသည်။ ပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကရယူပါ: http://minibuu.com/privacy-policy
Princess Computer ကဲ့သို႔ေသာ အက္ပ္မ်ား
APK သတင္းအခ်က္အလက္ - Princess Computer